Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Lasa adala ny mpanao politika
INTY SY NDAY : Lasa adala ny mpanao politika
Lasa adala ny mpanao politika Malagasy amin’izao fotoana izao satria dia be loatra ny no manaonao foana. Ny fahantrana izay mahazo ny vahoaka noho ny valan’aretina covid-19 izao no mbola itarihina olona hitokona sy hilahatra indray. Tsy izany ihany fa mamely mafy koa ny hain-tany tamin’ity taona ity ka nivadika tanteraka ny toetr’andro. Hatramin’ny reniran’Ikopa avy no ritra. Faritra maro manerana an’i Madagasikara no tratran’ny tsy fahampian-tsakafo noho izany. Dia mbola mamboly savorivory ihany ny mpanao politika gasy.
Tsy misy mihevitra intsony ny fahoriam-bahoaka fa izany no entin’ny mpanao politika vendrana sy adala eto amin’ity firenena ity krizy indray. Tsy misy mitondra vahaolana na kely aza fa mifanakiana sy mifampiampanga ho tsy may mitondra ny andaniny sy ny ankilany. Ady any amin’ny onjam-peo sisa ataon’izy ireo. Lasa fihantsiana sisa no ataon’ny mpanao politika Malagasy.
Ny mpanohitra ny fanjakana amin’izao fotoana izao dia efa manao hevitra botolo sisa ataon’izy ireo. Tsy manan-tsaina raha tsy ny hilahitra hanakorontana eto Antananarivo renivohitra. Hitarika krizy vaovao sy tsy manana eritreritra raha tsy ny hanongam-panjakana. Tsy mieritreritra raha tsy ny ho any ampaosiny ihany.
Ny mpomba ny fanjakana indray dia mpanara-drenirano fotsiny ny ankamaroany fa tsy misy mandray andraikitra amin’ny maha mpitondra fanjakana azy. Ny filoham-pirenena ihany no sady mandeha an-kavia no an-kavanana. Sady mively vy no mitsoka mozika. Vokatr’izany dia tsy misy antenaina intsony ny vahoaka fa raha vao misy zavatra mitranga dia miantso vonjy amin’ingahy Andry Nirina Rajoelina na dia zavatra tokony ho vitan’ireo mpiara miasa aminy aza. Mpitaty rà-kena no betsaka amin’ny mpiara-miasa amin’ny filoham-pirenena ankehitriny. Miandry mahazo fotsiny no betsaka satria tsy manana finiavana hampandroso ny firenena na dia kely aza. Vokatr’izany dia izao raharaham-pirenena misy ankehitriny izao.
Soa ihany fa mbola misy ny Malagasy misaina ka tsy tongan’ny hadalan’ny mpanao politika ireo intsony. Leo fanakorontana ny olona ankehitriny. Tsy nitondra soa hoa zy ny krizy niverimberina isakin’ny 10 taona. Fahantrana sy fahapotehin’ny firenena no nitranga vokatrin’ny fitarihana vahoaka an-dàlambe nataon’ny mpanao politika adala hatramin’izay.
Mba mieritrereta amin’izay ianareo mpanao politika io fa mamo anareo ny vahoaka noho ny hadalanareo be loatra.